🥇 ▷ FaceTime ee Apple waxay leeyihiin dhibaato sir ah oo daran ✅
FaceTime ee Apple waxay leeyihiin dhibaato sir ah oo daran
«Xogta shaqsiyeed ee dadka isticmaala Apple Iyagu waxay ku jiraan iPhonekooda, sidaa darteed ma heli karno. Kama ganacsaneyno macluumaadka macaamiisheenna ». Taasi waa sida ay u aflagaadeeyeen Tim Cook, maamulaha shirkadda Apple, Oktoobar ugu dambeysay.
Amiirkii weynaa ee Cupertino wuxuu ka dhaqaaqay Facebook iyo fadeexadiisa. Apple Waxaa had iyo jeer lagu gartaa awoodda adkeynta waxsoosaarkooda iyo adeegyadeeda, laakiin sannadihii ugu dambeeyay calankaasi waxaa ku dhacay fadeexado yaryar.
Liiska gaaban ayaa lagu daray, laga yaabee, mid ka mid ah kuwa ugu daran ilaa maantadan la joogo. The noocyo cusub oo macruufka ah waxay u oggolaanayaan iPhones kale in meel fog laga dhagaysan iyada oo aan loo baahnayn in qaataha aqbalaa wicitaankaMarka la soo koobo, dhibaato uu caan ku yahay Waqti.
“Waan ka warqabnaa dhibaatadan waxaanan helnay hab lagu xaliyo taas oo u soo bixi doonta sidii barnaamij cusboonaysiinta toddobaadkan,” ayuu sharraxay. Apple waa bayaan.
Apple wuxuu leeyahay Kumeelgaar ah ayaa la joojiyay adeegga FaceTime kooxaha, illaa iyo 02.16 waqtiga Isbaanishka, taasna waxaa ugu wacan “dhibaatadan” dib-u-eegis aan weli la shaacin.
Ciladdu waa muhiim, maxaa yeelay markaad qof ugu yeeraysid FaceTime iyo waqtiga jawaabta, waxaad isku shaandheyn kartaa shaashadda ilaa aad ku darto qeyb saddexaad oo wicitaan ah. Marka sidaas la yeelo waxay bilaabaysaa wicitaan kooxeed halkaas oo aad ka dhagaysan karto qofka kale adigoon aqbalin.